တချိူ့ သော သူငယ်ချင်းတွေက ကျနော် မိုင်းမှာ ဘာလုပ်တာလဲလို့ မေးတဲ့အတွက် အခုလိုဖြေပေးပါတယ်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » တချိူ့ သော သူငယ်ချင်းတွေက ကျနော် မိုင်းမှာ ဘာလုပ်တာလဲလို့ မေးတဲ့အတွက် အခုလိုဖြေပေးပါတယ်။
Posted by phone_kyaw on May 15, 2012 in Copy/Paste | 19 comments
ကိုဘုန်းကျော်ရေ … ပိုပြီးပြည့်စုံသွားအောင် …. ဒီလိုသင်တန်းတက်ဖို့ အဆက်သွယ် ၊ အခွင့်လမ်း ဘယ်လိုပေါ်လာတယ်ဆိုတာလေးပါ … ထည့်ရေးပါလားဗျို့ … ။ ဒေါ်လာ ခုနှစ်သောင်းကျော်ရတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ….. အလုပ်မ၀င်ခင်ချဉ်းကပ်ပုံလေး ဗဟုသုတလိုချင်လို့ပါ …
ဒါနဲ့ .. စကားမစပ် … ကိုဘုန်းကျော်လုပ်နေတဲ့ မိုင်းမှာ မြန်မာ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပါသလဲ
ကြွားပြန်ပြီလို့ မပြောနဲ့ အုံး။
ဒီလို အလုပ်ရဖို့ အတွက် ဘယ်လိုချဉ်းကပ်လဲ၊ ဘယ်လို အခွင့်အလမ်းပေါ်လာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ဖြေပေးပါအုံးမယ်။ ကျနော်နေတဲ့ အနောက်ဘက်ဒေသ ရဲ့ အဓိက စီးပွားရေးက မိုင်းတူးတာပါ။ တူးပြီး ရောင်းမှ ကျနော်တို့ ဗိုက်ပြည့်တယ်။
ဒါ့ကြောင့်မိုင်းလုပ်ငန်းပေါတယ်။ နိုင်ငံပေါင်းစုံက လာပြီးလုပ်ကြတယ်။ အိတုံပြောတဲ့ ခုနှစ်သောင်းကိုမက်လို့ ပါ။ ဒါက အနဲဆုံးလစာဖြစ်ပါတယ်။
မြို့ ထဲမှာ လုပ်ရင် လေးငါးသောင်းပဲ ရ တော့ လူတွေ မိုင်းကို လုပ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားတယ်။ မိုင်း အတွေ့ အကြုံနဲ့ ပညာတစ်ခုခုမတက်ရင် အလုပ်မရဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ကျနော် သင်တန်းကို အပင်ပန်းခံပြီးတက်ပါတယ်။ သင်တန်းတက်ဖို့ အတွက် အင်္ဂလိပ်လို တက်ရမယ်။ ကားမောင်းတက်ရမယ်။ အော်တိုတော့မရဘူး။ ကွန်ပြူတာကျွမ်းကျင်ရမယ်။ အနည်းဆုံး သြစီ ၁ဝ-တန်းတော့ အောင်ရမယ်။ ဒါဆိုရင် သင်တန်းက လက်ခံတယ်။ ကျနော်က မိုင်းမှာလုပ်ချင်တယ်လို့ ပြောတော့ အရင်ရောက်နေတဲ့ သူပုန်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်က ဒီသင်တန်းကိုတက်လို့ အကြံပေးတဲ့အတွက် သွားတက်ပါတယ်။
မိုင်းမှာ ဗမာ တစ်ယောက်နှစ်ယောက်တော့ ရှိတယ်။ လူချင်းတော့ မတွေ့ ပါဘူး။ ဗမာတွေက လက်ကြောမတင်း ပညာလည်းမတက်တော့ မြို့ ထဲက စက်ရုံ အလုပ်ရုံတွေမှာပဲ လုပ်ရပါတယ်။ တစ်ရက်မှာ ၁၂-နာရီ ၊ နေပူချိန် ၄ဝ ဒီဂရီအောက်မှာ သူတို့ မလုပ်နိုင်တော့ လစာကောင်းကောင်းမရဘူးပေါ့။
ကျနော့်ရဲ့ အသားအရည် နဲ့ရုပ်ရည်က ထိုင်းနိုင်ငံကကျွဲလိုဖြစ်နေပြီ။ ဓာတ်ပုံထဲမှာတော့ မီးရောင်ကြောင့်လှနေတာပေါ့ဗျာ။
ကိုဘုန်းကျော်ရေ … (စကားကြီးစကားကျယ်သိပ်မပါပဲ ) ပြန်ဖြေပေးတာ .. ကျေးဇူးပါ ။
အနည်းဆုံး သြစီ ဆယ်တန်းအောင်ရမယ်လို့ ပြောတယ်နော် … ။ ဒါဆို သူတို့နိုင်ငံမှာ တက်မြောက်အောင်မြင်မှပဲ ဒီအလုပ်ကို ရမယ်လို့ ပြောတာမျိုးလား … ။ ဒါမှမဟုတ် သြစီရဲ့ ဆယ်တန်းက တခြား ဘယ်နိုင်ငံတွေရဲ့ ဘယ်လယ်ဗယ်နဲ့ ညှိပြီး လုပ်ထားတာမျိုးရှိလား .. ။
ကိုဘုန်းကျော်တောင် ကိုယ်တိုင်ရှာတွေ့ထားတဲ့ အလုပ်မျိုးမဟုတ်ပဲ … သူပုန်ခေါင်းဆောင်က အကြံပေးလို့ တက်ဖြစ်သွားတာ(သူများ ဂိုက်လိုင်းပေးလို့လုပ်ဖြစ်တာ)ကို ကြည့်ချင်းအားဖြင့် … အဲ့ဒီကိုရောက်နေတဲ့ မြန်မာတွေလည်း .. အကြံပေးမယ့်လူ .. အသိပေးမယ့်လူ သတင်းပေးမယ့်လူမရှိလို့သာ ..မြို့ထဲက စက်ရုံတွေမှာ လုပ်နေရတာပေါ့လေ … ။ လက်ကြောမတင်း၊ ပညာလည်း မတတ်တော့လို့ ဆိုတဲ့ဟာကြီးကတော့ … တဖက်စောင်းသွားပြီ … ။ သူတို့မှာ ဘယ်သင်တန်းတက်ရမှန်း ၊ ဘယ်လို အလုပ်ကို ချဉ်းကပ်ရမှန်း မသိလို့သာ ဖြစ်နေတာပါ .. ။ မယ်မယ်ရရ အလုပ်တစ်ခု ဘာမှမရှိပဲ အိမ်မှာ ထိုင် ၊ မိဘလုပ်စာ ထိုင်စားနေတဲ့ သားဆိုး ၊ သမီးဆိုးတွေထက်တော့ … ရေခြားမြေခြားမှာ … ကြိုးစားဖက်တွယ်ရပ်တည်ပြီး အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ ဘ၀တွေက .. အများကြီးသာပါတယ်ဗျို့ … ။
တစ်ရက်မှာ ၁၂-နာရီ ၊ နေပူချိန် ၄ဝ ဒီဂရီအောက်မှာအလုပ်လုပ်နေကြရပြီး .. လစာနည်းတဲ့ လူမသိသူမသိ ပင်ပန်းကြီးစွာ ရှာစားနေရတဲ့ ဘ၀တွေ .. ဒီနိုင်ငံမှာ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ … ။သူတို့လည်း ပင်ပန်းကြပါတယ် …. ။ ဒါပေမယ့် .. ပညာလည်းမတတ် ၊ အခွင့်လမ်းလည်း မသိတော့ … ပင်ပန်းတာချင်းတူတူ ..ငွေရမယ့်အခွင့်လမ်း နည်းတယ်ပေါ့လေ … ။ သြစီကနေပြီး … မြန်မာနိုင်ငံသား၊ အခြေခံအလုပ်သမားတွေအတွက် အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းဖွင့်ပေးဖို့ အစီစဉ်မရှိဘူးလား … ။လုပ်ပေးကိုင်ပေးကူညီပေးချင်စိတ်ရော မရှိဘူးလား … ။ ဟေ့ဟေ့ .. စေတနာ သန့်သန့်နဲ့ပြောတာနော် … လူကုန်ကူးမှုကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး …
နာတို့ ရပ်ကွက်ထဲက တောသားတွေ မလေးတို့ထိုင်းတို့သွားလုပ်မဲ့အစား ကဘုတ်ကျော်ကြီးနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး
ဘာဝတ်စုံမှမရှိဘဲ နေပူထဲမှာ မဆလာရွက် သံဂျွတ်ထမ်း ကျောက်သယ် လုပ်နေခဲ့သေးတာ ကဘုတ်ကျော်တို့ မိုင်းတွင်းလောက်တော့ တစ်ကယ်လုပ်ဖြစ်ရင် သနားတယ်လို့ တောင် ပြောဦးမယ်ထင်တယ်..(လက်ကြောလေးတော့ တင်းဘို့ လိုတာပေါ့လေ..)
ကျုပ်ဆို လက်ကြောကော ချေကြောကော အကုန်တင်းတယ်..
ဘာအလုပ်ဖြစ်ဖြစ် အကျင့်ဖြစ်သွားရင် အိုခေပါတယ်ဗျာ..စစချင်းသာ တိုင်ပတ်မှာပါ…
(ဗိုက်ကလေးတို့ ကတော့ သိတဲ့အတိုင် အပြောမှာ ရွှေမန်း အကမှာ ချိုမိုင်မိုင် )
မေးတိုင်းသာ ပြန်ဖြေနေရရင်တော့ ပြီးတော့မှ မဟုတ်တော့ဘူး အိတုံရေ…နောက်မှမေးတော့ မအားဘူးဟ
အောင်မလေး ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တော် … သူလွှတ်ကြွားထားတာ ဟုတ်ဧ။်မဟုတ်ဧ။့် ချင့်တွေးရုံတင်ရှိသေး .. မအားဘူး ချက်ချင်းဖြစ်ရော … ။ အံ့ရော.. အံ့ရော .. ဟိဟိ …
သူတို့year 10 က ကျွန်တော် တို့ ဆယ်တန်းလောက်၊ ကျော်ကျော် နဲ့ တန်းညိုတယ်ထင်ပါတယ် ဘာလို့ လဲဆို ယူနီသွားဖို့ ဆိုရင် ၁၀တန်းပြီးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကို foundation course တနှစ် တက်ဖို့Uni ကအကြံပေးပါတယ် ဆိုလိုတာကတော့ GCE 0/A ပေါ့နော်. ဒီကLocalကလေးတွေ အတွက်ကတော့Uni ကို year 12 ပြီး မှ တကက်သိုလ် ကသတ်မှတ်တဲ့Higher School Certificate (HSC)//OP ၀င်မှ တက်လို့ ၇ပါတယ် ဥပမာ အင်ဂျင်နီယာ(Avionics Engineering)တက်မယ် ဆိုရင် အနည်းဆုံး year 12 OP2(state wide အမှတ်ပေါင်းမှာ ပထမနဲ့ ဒုတိယ ၇တဲ့ သူတွေ) လောက်ရမှပါ တကယ် ဗမာ ၁၀ တန်း က သင်ချာနဲ့ဖိဆစ် အတော်များများကို ပိုင်ရင် Uni first year မှာ အေးအေးဆေးဆေးပါ ဆရာဝန်လုပ်ချင်တယ်ဆို၇င်တော့ဒုတိယဘွဲ့ မှသာ ဆေးကျောင်းသွားနိုင်ပါတယ် ဒါမှဟုတ် ဆေးကျောင်းဝင် ခွင့်ဖြေရပါတယ် လူဖြူအတော်များများ ကဆေးကျောင်းသိပ်မသွားကျပါဘူး finance/business/Law/Management field တွေသွားကျပါတယ် များသောအားဖြင့် ဒီကလူငယ်တွေ က တက်ကသိုလ်မသွားတော့ဘူးဆိုရင် ၉တန်း ၁၀တန်းလောက်နဲ့ ထွက်ပြီး Trade တွေမှာ apprenticeship (အလုပ်သင်အနေနဲ့ ) အနေနဲ့ပထမနှစ် ဒုတိယနှစ် တတိယနှစ် လုပ်ပြီးရင် သက်ဆိုင်ရာ Trade license တွေယူပြီး လုပ်စားကြပါတယ် ရေပိုက်ပြင်တဲ့ အလုပ် မီးပြင်တဲ့ လူ သူတို့ ရဲ့ တနာရီ လုပ်စာ က အနည်းဆုံး ၅၀$ ကနေပြီး ၉၀$ ၁၀၀$ ကျော်အထိရှိပါတယ် ဈေးသိပ်ကြီးပါတယ် မီးပြင်တတ်ပေမဲ့မီးပြင်တဲ့ Trade license Safety License မရှိရင် Insurance မရှိရင် မီးပြင်စားလို့ မရပါဘူး မီးပြင်နေတုန်း ကိုယ့် ကြောင့် တခုခုမှားလို့ ရှိ၇င် လျော်ဖို့Insurance ပါ..တခြား Tradeတွေလဲ အဲဒီလိုပါပဲ ဒါမှမဟုတ်ရင် ကဖုန်းကျော်လို့သက်ဆိုင်ရာ certificates ကို TAFE တွေမှာ ဖြေပြီးလဲ ၀င်လို့ ရပါတယ် အဆက်အသွယ်၇နိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ် ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့များသောအားဖြင့်Trade လုပ်စားတဲ့ သူတွေ က အဖြူတွေပိုများပါတယ် ထင်တာကတော့ သူတို့ လူငယ်တွေ အတွက် အခွင့် အလမ်းတွေ ကို ဖွင့်ထားပေးတယ်ဆိုထင်ပါတယ်ဗျာ ” သြစီကနေပြီး … မြန်မာနိုင်ငံသား၊ အခြေခံအလုပ်သမားတွေအတွက် အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းဖွင့်ပေးဖို့ အစီစဉ်မရှိဘူးလား … ။လုပ်ပေးကိုင်ပေးကူညီပေးချင်စိတ်ရော မရှိဘူးလား …” ခုချိန်မှာ မလွယ်ဘူးနဲ့ တူပါတယ် ကုမပ်ဏီ တွေ ပိတ်ပြီး တရုတ်ကို ပြောင်းရွေ့ နေလို့နေစဉ်နဲ့ အမျှ အဖြူ အလုပ်လုပ်မဲ့ ဖြစ်တာတွေ ကြားနေရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ် သူတို့ ကတော့ သူတို့ လူမျိုးတွေ ကို မှာ Trade sectors တွေမှာ Technician တွေအနေနဲ့ပို အလုပ်ရအောင် License တွေနဲ့ ထိမ်းချုပ်ထားပါတယ် ဂျီတီအိုင် လောက်ပြီးလို့အင်းကလိပ်စာ၇ ပြီး TAFE သင်တန်းတွေတက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ License ရအောင်ဖြေနိုင်ရင်တော့အလုပ်ရှာလို့ ၇မှာပါ မိုင်းမှာအလုပ်လုပ်တာတော့ပိုက်ဆံ အများကြီး၇ပါတယ် ဒါပေမယ် အသက်အနတ်ရယ်ကများတွေ လူတွေ တွန့်ပါတယ် တချို့ ကတော့မိုင်းမှာ ၁၀ လောက်လုပ်ပြီး ပိုက်ဆံစုပြီး ကိုယ်ပိုင် business တွေစလုပ်ကျပါတယ် Australia မှာ state နဲ့ တခု မတူတဲ့ အတွက် ကွဲလွဲမှု ရှိနိုင်ပါတယ် အမှားပါတယ်ဆိုရင် ထောက်ပြနိုင်ပါတယ်ဗျာ
sealion ရေ …. ဗဟုသုတအနေနဲ့ သိခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ။
ခင်ဗျားပြောတာ မှန်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ၁ဝ-တန်းအရည်အချင်းက သြစီက ၁၂-တန်းလောက်တော့ မရှိပါဘူး။ ဒါတော့ ဆရာဆရာမတွေ ပိုသိမယ်ထင်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ သြစတျေးလျလို အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ ပညာရေးအခွင့်အလမ်းကိုဖွင့်ပေးနိုင်အောင် လုပ်ရတာလွယ်တယ်။ ခက်တာက ကျနော့်မှာ အာဏာမရှိတာအပြင် ဗမာပြည်ကို ဝင်ဖို့ ဗီဇာတောင် အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်။
မြန်မာပြည်က သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးတစ်ပါးပါးနဲ့ညွန်မှုးတွေ သြစီမှာ လာလေ့လာ။ ပြီးရင် အကူအညီတောင်း။ မသိတာကို အောက်ကျိူ့ ခံပြီး သင်။ ဒီလိုလုပ်ရင်တော့ သြစီတွေလည်းလူတွေပဲမို့ကူညီပါလိမ့်မယ်။ ကျနော့်အကူအညီလိုရင်လည်းပြောပေါ့။ ဘယ်ဂွင်မှာဘာရနိုင်လဲဆိုတာကို ကောင်းကောင်းသိတယ်။ မယုံရင် စမ်းကြည့်ပါ။ လေတော့နဲနဲကြီးတာကို သည်းခံကြပေါ့။
အဟမ်း… ရန်ကုန် ပန်းဆိုးတန်းဆိပ်ကမ်းကနေ… ကြယ်ငါးပွင့်စီးပြီး…
အင်ဒိုနီးရှားကိုသွား… ပြီးတော့ အင်ဒိုကနေ သြစီကို ငါးဖမ်းစက်လှေနဲ့
ခိုးဝင်ပြီး ကဖုန်းကျော်ဆီက မိုင်းတွင်းအလုပ်လေးများ…. တောင်းမလားလို့… :cool:
ဒေါ်လှ ၇သောင်းမရလည်း ၃သောင်းလောက်ဆိုလည်း လုပ်ပျော်ပါတယ်လေ…။
ဗိုက်ကလေးရေ… လိုက်မလား.. ဆိုက်ကားနဲ့ သွားကြမယ်ဟ…
ဟိုရောက်မှ အူလေးဖုတ်ကျော်က ခေါ်ဘူးဆို တားတို့ တတွေ ဆိုက်ကားတစ်စီးနဲ့တိုင်ပတ်နေဦးမယ်
ဟဲ့ မခေါ်ဘူးဆို .. ဘာကားစီးစီး.. ပြန်ရောက်သေးတယ်အေ့ … ။ ညည်းတို့ကို ဆပ်ကက်ရုံထဲသွင်း ပွဲပြစားမယ်ဆိုမှ .. လွတ်လမ်းမရှိဖြစ်နေဦးမယ် …
အူးလေးဖုတ်ကျော်က အဲလောက်တော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူးဂျ
မြန်မာ့ဓာတ်ရှင်မင်းသား အောင်ပိုင်လိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ 
အူးဖုတ်ကျော်က ရုပ်ချောတယ် သဘောကောင်းတယ်..
ဓါးထိုးပတ်စက်မယ့် ရုပ်ကြီးဗျ… သားသားဒေါ့ ကြောက်တယ်..
နာတို့ အူးဖုတ်ကျော် ခုတလော စိတ်ကောင်းဝင်နေဒယ်..
အခု ကြယ်ငါးပွင့် မရှိတော့ဘူး မဟုတ်လား။
ကလေးတွေ ကိုလဲ မျှကျွေး လိုက်ဦးနော်။ :-)
ကိုဘုန်းကျော်က အနောက်သြစတြေးလျှမှာနေတာဆိုတော့ Perth မှာပဲလား အဲဒီမှာတော့မြန်ူမာတွေ တော်တော်များတယ်ဆိုတော့လေ။ ကျမ ၀မ်းကွဲအစ်မနှစ်ယောက်ရဲ့အမျိုးသားတွေ လည်းမိုင်းမှာပဲအလုပ်လုပ်ကြတယ်။ ကျမသွားလည်တဲ့၃လ မှာသူတို့ကို နှစ်ခါလောက်ပဲတွေ့လို့ဘယ်မှာ လုပ်လဲမေးမိတော့မိုင်းမှာ လစာအရမ်းကောင်းလို့သွားလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်။ ကိုယ်လည်းဆက်တော့မမေးတော့ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိုင်းဆိုရင် တရုတ်ကမိုင်းတွေအကြောင်း ချီလီမိုင်းအကြောင်းတွေကိုရင်းနှီးနေတော့ ကိုယ်ဖာသာပဲ risk များလို့ လစာနဲ့ facilities ကောင်းကောင်းပေးတာလို့ပဲယူဆလိုက်မိလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် Ausi မှာတော့ အလုပ်သမားတွေ အတွက်လုံခြုံရေးစနစ်တွေကတော့ တရုတ်ထက်တော့အများကြီးသာမှာပါ
ဒါနဲ့ PhD ဆိုရင်ရော ဘယ်လောက်ပေးလည်းဗျ။ မိုင်းလာတူးမယ်ဗျို့ 